Otu esi etinye Framework Metasploit na Ubuntu 20.04 - LinuxCapable
Otu esi etinye Metasploit Framework na Ubuntu 20.04
September 11, 2021 September 9, 2021 by Jọshụa James
Wụnye ngwugwu WGET:
Wụnye Metasploit maka Ubuntu 20.04
Otu esi ebido Metasploit na Terminal
Na-eme ihe nrigbu / nyocha / modul
Mbido Oge mbu
N'ime msfconsole Terminal
Iwu nnọkọ ihe atụ
Welite ihe ùgwù
Izu ohi Token (naanị Windows)
Ịchọta nrigbu / akwụ ụgwọ a ga-eji
Metasploit Framework bụ ọrụ mepere emepe nke na-enye akụrụngwa ọha maka nyocha adịghị ike na mmepe koodu. Ọ na-enye ndị ọkachamara nchekwa ohere ịchọpụta nbanye n'ime netwọkụ ha wee chọpụta ihe egwu na adịghị ike na mpaghara dị iche iche dịka ngwanrọ, sistemu, ma ọ bụ netwọkụ. Metasploit na-abịa juputara na nrigbu ndị dị ugbu a mana ọ na-enye usoro iji mepụta nrigbu omenala nke gị.
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta Otu esi etinye ma jiri Metasploit na Ubuntu 20.04.
Nkuzi a ga-eji iwu wget wee jide n'aka na wget ka dị ka ndị a:
Rịba ama, ọ bụrụ na ejighị n'aka, mee naanị iwu ahụ; ime otú ahụ agaghị afụ ụfụ.
Site na ndabara, ebe nchekwa Ubuntu 20.04 anaghị abịa na ngwanrọ ahụ, yabụ ị ga-ebudata ihe nrụnye ngwugwu. Ọ dabara nke ọma, Rapid 7, ụlọ ọrụ dị n'azụ Metasploit, nwere ihe nrụnye isi mmalite nke ị nwere ike ibudata iji wụnye ụdị ọhụrụ.
Gbaa iwu a ka ibudata ihe nrụnye Metasploit:
Ugbu a, ị ga-eme ka installer ahụ rụọ ọrụ site n'inye ya ikike +x dị ka ndị a:
Nzọụkwụ ọzọ bụ ịwụnye Metasploit ugbu a, nke a bụ usoro kwụ ọtọ. Gbaa iwu na-esonụ na ọdụ gị:
Na-esote, ị ga-ahụ usoro mmapụta nke nkuzi ga-akọwa na usoro.
Kwụpụ 1. A ga-egosi mmapụta nnabata; pịa Pịa bọtịnụ ịga n'ihu na nwụnye.
Kwụpụ 2. A ga-egosipụta nkwekọrịta na usoro ikike ugbu a; pịa na Ana m anabata nkwekọrịta ahụ wee pịa Pịa bọtịnụ aga n'ihu.
Nzọụkwụ 3. The echichi A ga-egosi ihuenyo nchekwa; na-esote, ọtụtụ ndị ọrụ na-ahapụ ya dị ka ndabara ọ gwụla ma ịchọrọ ịchekwa ya ebe ọzọ. Pịa Pịa bọtịnụ ịga n'ihu na ihuenyo ọzọ.
Kwụpụ 4. Wụnye dị ka ọrụ ga-abụ nhọrọ ọzọ; nke a bụ mmasị onye ọrụ, yabụ họrọ EE OR OBU, wee pịa Pịa bọtịnụ aga n'ihu.
Mara, ndabara bụ ịtọ EE.
Kwụpụ 5. Gbanyụọ Anti-Virus na Firewall ga-egosi na-esote; n'ụzọ doro anya, n'ihi na ọdịdị nke software ị na-wụnye, ọ ga-abụ na ọ ga-egbochi, n'ihi ya, ị ga-mkpa gbanyụọ ihe ọ bụla firewalls na nje scanners i nwere na gị usoro; ozugbo emechara, pịa na Pịa bọtịnụ.
Kwụpụ 6. Metasploit Ọrụ SSL n'ọdụ ụgbọ mmiri, gbanwee ma ọ bụ dobe ndabara wee pịa ya Pịa bọtịnụ.
Kwụpụ 7. Mepụta Asambodo SSL, nye aha nnabata; ọ bụrụ na ị na-etinye na sistemụ mpaghara, jiri localhost. Ozugbo emechara, pịa Pịa bọtịnụ.
Kwụpụ 8. Họrọ ọdụ data nke Metasploit ga-eji. Ihe ndabara kwesịrị ịdị mma maka ọtụtụ ndị ọrụ. Ozugbo emechara, pịa Pịa bọtịnụ.
Kwụpụ 9. Họrọ ọdụ ụgbọ mmiri dị mkpa, dị ka ọ dị na ọdụ ụgbọ mmiri data gara aga, na ọdụ ụgbọ mmiri dị mkpa kwesịrị dabara ọtụtụ ndị ọrụ. Ozugbo emechara, pịa Pịa bọtịnụ.
Kwụpụ 10. Njikere ịwụnye ihuenyo ga-apụta; ugbu a pịa na Pịa bọtịnụ imecha echichi.
Ugbu a, ị ga-abịa na mpio emechara na-agwa gị na ị tinyela Metasploit nke ọma na ọ ga-amasị gị ịnweta Metasploit Web UI ugbu a.
Ọ bụrụ na ị họrọ ịnweta Metasploit Web UI, ị ga-abịa na ihuenyo nnabata n'okpuru yana ụfọdụ ozi gbasara Metasploit yana otu o si arụ ọrụ na ihe nchọgharị gị, yana isi ihe ị ga-achọ ịma gbasara ọrụ ahụ.
Site na ebe a, ị nwere ike ịga n'ihu ịmepụta akaụntụ onye ọrụ site na iji WebUI:
N'ikpeazụ, tinye igodo ikike, nke ị nwere ike ịga na Rapid7 iji nweta site na ịpị "Nweta igodo ngwaahịa" njikọ.
Enwere ike iji Metasploit na ọdụ Ubuntu gị yana akụrụngwa akara aha aha ya msfconsole.
Mepụta Metasploit na ọdụ gị:
N'okpuru bụ ụfọdụ iwu nkịtị ị nwere ike iji Metasploit.
msfconsole Mmalite mmemme
version Gosipụta ụdị ugbu a
msfupdate Denye mmelite kwa izu
emerc <FILE.rc> Na-echekwa iwu ọhụrụ ka ọ bụrụ faịlụ
msfconsole -r <FILE.rc> Na-eburu faịlụ akụrụngwa
ojiji <MODULE> Tọọ nrigbu ka ọ were
tọọ ibu ọrụ <PAYLOAD> Tọọ ibu ọrụ
gosi nhọrọ Gosi nhọrọ niile
set <OPTION> <SETTING> Tọọ ntọala
irigbu ma ọ bụ na-agba ọsọ Mee ihe ahụ
nnọkọ -l Depụta oge niile
nnọkọ -i <ID> Mekọrịta/tinye na nnọkọ
ndabere ma ọ bụ ^Z Wepụ na nnọkọ
DB na-echekwa data achọtara n'oge nrigbu. Nsonaazụ nyocha inyeaka, mkpofu hash, na nzere na-egosi na DB.
ọrụ postgresql Malite Malite DB
msfdb Init Tinye DB
db_ọnọdụ Kwesịrị ịsị ejikọrọ
ụsụụ ndị agha Gosi ndị ọbịa na DB
ọrụ Gosi ọdụ ụgbọ mmiri na DB
vulne Gosi vuln niile achọtara
Meterpreter bụ ụgwọ a na-akwụ n'ime Metasploit Framework nke na-achịkwa sistemu ebumnuche eji eme ihe, na-agba ọsọ dị ka DLL n'ime usoro ọ bụla na igwe ebumnuche.
sysinfo Gosi ozi sistemu
ps Gosi usoro ịgba ọsọ
igbu <PID> Kwụsị usoro
gatuid Gosi njirimara njirimara gị
bulite / budata Bulite/budata faịlụ
pwd/lpwd Bipụta akwụkwọ ndekọ aha (mpaghara/ime ime)
cd/lcd Gbanwee ndekọ (mpaghara/ime obodo)
cat Gosi ọdịnaya nke faịlụ
edit <FILE> Dezie faịlụ (vim)
shei Tuba n'ime shei na igwe ebumnuche
kwaga <PID> Banye na usoro ọzọ
hashdump Gosi hashes PW niile (naanị Windows)
oge efu Gosipụta oge nke onye ọrụ
nseta ihuenyo Were nseta ihuenyo
clearev Hichapụ ndekọ
jiri priv Budata edemede ahụ
nweta sistemu Welie ihe nzuzo gị
getprivs Welie ihe nzuzo gị
jiri incognito Budata edemede ahụ
ndepụta_token -u Gosi akara niile
iṅomi_token DOMAIN USER Jiri akara ngosi
drop_token Kwụsị iji token
portfwd [ADD/HIchapụ] -L <LHOST> -l 3388 -r <RHOST> - peeji nke 3389 Kwado mbugharị ọdụ ụgbọ mmiri
ụzọ tinye <SUBNET> <MASK> Banye site na nnọkọ site na ịgbakwunye ụzọ n'ime msf
ụzọ tinye 192.168.0.0/24 Banye site na nnọkọ site na ịgbakwunye ụzọ n'ime msf
ụzọ tinye 192.168.0.0/24 -d Ihichapụ ụzọ n'ime msf
search <TERM> Na-achọ mkpagbu niile, ibu a na-akwụ ụgwọ na modul inyeaka
gosi irigbu Gosi mkpagbu niile
gosi ụgwọ ọrụ Gosi ibu niile akwụ ụgwọ
gosi inyeaka Gosi modulu inyeaka (dị ka nyocha)
gosi ihe niile *
Nkuzi a kuziri gi ka esi etinye Metasploit na Ubuntu 20.04 wee nweta isi ihe webụ UI. N'ozuzu, ị nwere ike ime mwakpo eburu ụzọ mata dị ka ịdebanye aha onye na-enweghị paswọọdụ, hacking kamera weebụ, hacking nkesa weebụ, hacking nkesa email, ma ọ bụ ịmepụta ịkpa ókè. Dị ka o kwesịrị, a ga-eji nke a maka imeziwanye nchekwa netwọkụ gị ma ekwesịrị iwere ya dị ka nke a.
Otu esi etinye & Jiri ClamAV na AlmaLinux 8
Otu esi etinye MariaDB 10.6 na Ubuntu 20.04